भारतमा अलपत्र प्युठानीकाे गुनासाे राेगले भन्दा भाेक मरिने चिन्ता
/ २०७७, २५ बैशाख बिहीबार ११:०५ प्रकाशीत
बिमल प्रसाद पाेख्रेल २५ बैशाख,प्युठान
भारतकाे राजस्थान,पजांब दिल्ली ,लुधियनामा १०० औं प्युठानी अलपत्र परेका छन ।काेराेना भाईरसकाे बढ्दाे महामारीका कारण भारत सरकारले लगडाउन गरेपछि विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत प्युठानीलाई साझ बिहानकाे छाक टार्न मुस्किल भएकाे राजस्थानकाे गंगानगरबाट चुडामणि न्याैपानेले दुखेसाे सुनाउनु भयाे । उहाकाे घर प्युठान नगरपालिका ५ जुम्रिकाडा रहेकाे बताउनु भयाे।कतैबाट कुनै पहल भएन सत्तरी जना हामी प्युठानी राजिस्थानमा छाै । नेपाल फर्कन पाए भाेगले मर्ने थिएन ।
अामाकाे उपचार पछि लुधियानामा अलपत्र केशब पट्टेल।
अाफुसंगै भएकाकाे गुनासाे सुनाउनु भयाे।अामाकाे उपचारका लागि लुधियाना जानुभएका मल्लरानि खलंगाका केशब पट्टेल भन्नुहुन्छ । फागुनमा अाएकाे चैतमै अामाकाे उपचार गरि निकाे भयाे । अाैषधी पनि किनियाे साथमा रकम छैन सहयाेग कतैबाट छैन। राेगले भन्दा भाेकले मरिने भयाे भन्नुहुन्छ।
उहाकाे गुनासाे जस्ताकाे त्यस्तैM aafno mammi ko upachar ko Lagu aayko3Mahina vayo Niko banai Chaitra Mahina ma Nepal farkane tayari thiyo Tara luck down ko Karan sakiyna ,ahile India Sarkar le Nepal jan ko lagi subidha diyko xa testai gari Hamro Nepal Sarkar le pani kunau subidha garai aa aafno gantabbe ma puraune sahyog Hari m jastai alapatra pareka Sampurna nepaliko uddar garnuhuna anurod gardaxu !!hoina vane Korona le hoina allpatra r vokmari le dherai Nepali ko jyan Jane xa …..,,plg Nepal Sarkar janta uddar!!!!¡!
उता हिमालचल प्रदेशबाट पनि कयाै प्युठाली लिएर रेडियो स्वर्गद्वारीकाे फाेनमा बारबार फाेन गरि दुखेसाे पाेखेका छन । देश फर्काए सरकारले जे भन्छ मान्छाै घरमा अाटाे पिठाे छ ,सरकार ल्याउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन ।